ट्वाइलेटमा मोबाइल चलाउने बानी छ ? सावधान ज्यानलाई छ खतरा ! - Khabar Break | Khabar Break
ट्वाइलेटमा मोबाइल चलाउने बानी छ ? सावधान ज्यानलाई छ खतरा !
प्रविधिले फड्को मारेसँगै मानिसको सवैभन्दा नजिकको साथी मोबाइल बनेको छ ।हरेक मान्छेको हात–हातमा मोबाइल सहज उपलब्ध भएको छ । मानिस अलिकति फुर्सदिलो भयो कि मोबाइलमै झुन्डिन्छन् । खानाबेला देखी ट्वाइलेट वा बाथरुममा हुँदासम्म मोबाइलको प्रयोग गर्ने धेरैको बानी हुनसक्छ ।
ट्वाइलेटमा बसेका बेला गेम खेल्ने, च्याट गर्ने वा फोनमा बोल्ने गर्नु स्वास्थ्यमाथी खेलवाड गर्नु हो । यस्तो बानीले ज्यानै जानसक्ने विशेषज्ञहरु बताउँछन् ।
बाथरुम वा ट्वाइलेमा मोबाइल प्रयोग गर्ने बानीले गम्भिर रोग निम्त्याइरहेको विशेषज्ञहरुको दाबी गर्छन् । ट्वाइलेट बाहिर प्रयोग गरिने वस्तु, मोबाइल वा अन्य वस्तु ट्वालेट भित्र प्रयोग गर्न नहुने उनीहरु सुझाउछन् ।
जब तपाई ट्वाइलेटमा ‘फ्लस’ गर्नुहुन्छ अथवा पानी हाल्नुहुन्छ, युरिन तथा फोहोर वस्तुहरु केही फिटमाथिसम्म आउँछ, हावामा मिसिन्छ । जुन रोग संक्रमणको कारण बन्छ ।
जति पटक ‘फ्लस’ गर्नुहुन्छ उति पटक किटाणु हावामा फैलने गर्छ । ट्वाइलेटमा राखिएको ‘पेपर होल्डर’मा सबैभन्दा बढी किटाणु बसेका हुन्छन् । धेरै जसोले आफ्नो फोन त्यही ‘पेपर होल्डर’मा राख्ने गर्छन् ।
जसका कारण इ–कोइल, सालमोनेला, सि–डिफिसाइलजस्ता ब्याक्टेरिया फोनमा सल्किन्छ। अनि त्यहि फोन हामी दिनभर हातले समात्छौँ, त्यहि हातले खाने कुरा खान्छौं। यति गर्दा पनि ट्वाइलेटमा फोन बिना बस्नै सक्नुहुन्न भने, ‘स्पिरिट’ ले फोनलाई बारम्बार सफा गर्नुपर्ने उनीहरु सुझाउँछन् ।